Zonke izingane zithande ukudweba. Lokhu akusona isimanga: phela kunqubo kuyathakazelisa injabulo abaculi abasha ukufunda amapensela nopende. Okokuqala, kungenxa emazwini ezinganeni ngokwazo, kalyaki-Malaki. Izingane bathande ukuba uqale ukufunda umbala. Khona-ke umculi osemusha iveza nomkhaya wakhe nakho konke akubonayo emzungezile. Ungakwazi ukufundisa izingane ukudweba, kusetshenziswe amasu ahlukene: Ake Zama amakhrayoni, upende, izimpawu ... Futhi kaningi kwenzeka ukuthi umcabango ububanzi ndawo ukuzulazula - kungenzeka ukuveza okuthile uyibhala landscape? Khona-ke, e-course sangemuva, izindonga, amatafula kanye nezinhlobonhlobo zezinye evele ezindaweni eziyingozi, lapho ingane angathola. Vele amnike umsebenzi, noma kunjalo, ukuthatha into kid - ephephile ngaye nangalabo esikhulekela ifenisha, kodwa futhi ewusizo futhi kumnandi. Ngokwesibonelo, mbonise ukudweba izilwane kanjani umsizi ngezigaba - ngokuvumelana nemithetho. Okokuqala, yebo, ngeke kwenzeke, kodwa ukuqeqeshwa - isihluthulelo sempumelelo. Ngakho sithola izilwane step by step: yonke into ilula kakhulu futhi okusheshayo.
Isinyathelo Sokuqala: Ukuqalisa
Yiqiniso, wena umane ukudweba isilwane phakathi ishidi elimhlophe futhi ushiye ku-albhamu. Futhi ungenza lokhu umsebenzi ukuziqhenya yangempela. Okokuqala unquma ukuthi ufuna ukudweba: upende, ngokwesibonelo, kangcono luhlaka ngaphezulu. Fundisa ingane yakho ukusebenzisa ibhulashi noma alole amapensela kanye irabha ukusula imigqa ezingadingekile. Bese ukhetha ngusiphi silwane ufuna ukuveza. Uma umculi unesithakazelo a Critter elithile, ukudweba kuwo. Ngo inqubo umdwebo ungakwazi ukutshela ingane mayelana lesi silo. Okulandelayo, nquma ukuthi yini ngemuva lengqondo isilwane. Uma kunjalo, isibonelo, ikati, ungakha isimo homey, indawo elilandelayo ibhola. Kodwa uma unayo ukuyichazela inkosi yezilwane - ingonyama, bese udweba ke ku Savannah. Impisi abayophila isithombe ihlathi ebusika, kodwa ihlengethwa - emanzini ezilwandle ezifudumele. Kuyi-Internet ungathola ezihlukahlukene workshop ngale ndaba. Kunezifundo e ihluzo, okuyinto ukweluleka kanjani ukufunda ukudweba izilwane step by step - kodwa futhi kudingeka uzwakale ukuthi umdwebi wayekwazi udonsa umugqa ezithile. Ungakwazi bangahlikihla, futhi ungakwazi beveza isithombe ngokwaso. Ngakho sithola izilwane step by step. Cabanga ngesibonelo sika-isifundo izilwane eziningana.
Funda ukudweba izilwane step by step. Isinyathelo Sesibili: Uma, Indilinga ezimbili ...
Akekho iqala ukudweba iso ikati. Ngakho-ke, ukuze siqale, ukwakha uhlaka. isisekelo Its ilula ngaso sonke isikhathi. Omunye umfanekiso - emzimbeni, kwesibili - ikhanda lakhe. Inja, isibonelo, umzimba elingunxande futhi inhloko efanayo emincane. Kodwa umzimba ikati sika side noma round. round kakhulu Umumo ingulube. Izinhlanzi - okusaqanda. Ukuze udwebe e esigabeni sokuqala ufudu, ukudweba semi umbuthano njengengxenye igobolondo. Ukuze kube lula, uphawu umuda wesimethri ebusweni. Lokhu ucabangela ukuma wesilwane, ukuthambekela futhi ukujikeleza ikhanda nokunye. Futhi ukuze uqale nge Ungeqisi it ne yinkimbinkimbi sibalo lwesilo. Khona-ke iyindaba izinyawo. Ikati athambe: ukwenza encane poluovaly lwalugobile, laphezu kwazo kulotshiwe ngokwamazwi - emibuthanweni encane ngisho 4-umunwe. Esikhathini inja ngokuvamile eside futhi kakhulu unyawo unxande. Kodwa ingulube - inselo. Thina zibe ufudu imilenze enwetshiwe phansi. Khumbula, ukuthi ifomu umsila kungaba isilo. Kolayini asizayo lapho sithola izilwane zasendle ngezigaba, usebenzisa induku okuqinile noma cha ukuze cindezela iphepha uvalwe. Phela, nabo basuke namanje ke kufanele zisuswe.
Isinyathelo Sesithathu: Down nazo zonke engadingekile!
Njengoba sithola izilwane step by step, musa ukusheshe umfanekiso yonke isilwane. Lapho isifunda usulungile, uhlangane zonke izibalo umugqa ezibushelelezi. Ungakhohlwa emphethweni isikhumba. Musa ukulandela zifa emigqeni asizayo: they yodwa ukuphakamisa. Kulo sinyathelo, lapho sithola izilwane step by step, ungasusa umugqa lapho imilenze ujoyine emzimbeni. Dweba entanyeni. Uma lengqondo wekati noma yisiphi isilwane nge noboya, cabanga ukuthi wenze izihlathi bushelelezi (ke Lungisa umbuthano asizayo) noma engeza izinwele (ke esihlathini kuyinto esingunxantathu). Kumele kukhunjulwe futhi ezindlebeni: yilo- ngaphandle kwabo isifonyo noma izindlebe tabobunjwa liphethwe frog, inja, ikati, impungushe noma ibhere. Prorisovyvaya amehlo, zama okuningi abayinakanga abafundi ukukhanya. Uma usondela ikati ikhathuni, amehlo kumelwe ube mkhulu. Ngokuvamile, ifomu elifanele ngokwanele mbuthano (ukuze kuhlaliswe ukusetshenziswa iso engu- imigqa engonxantathu ebusweni) nomunye ngaphakathi umkhumbi - umfundi. Cishe empambana kwalezi imigqa ukwakha Iqhinga imikiswe inja, ikati noma esingunxantathu empumulweni round izingulube. Down emakhaleni nasebusweni emlonyeni izihlathi. Ungenza lokhu esebenzisa imigqa emibili lwalugobile. Ungakhohlwa mayelana imigomo yakho ubuso isilwane. Lapho yonke into ihamba kahle eyisisekelo, ungakwazi kalula ukusula imigqa ukwakhiwa bese udlulela umniningwane emihle kakhulu futhi kwenaba isizinda.
Dweba izilwane step by step. Isinyathelo sesine: ubuhle wakhiwa imininingwane
Uma nomlomo iphelile, bese ucabanga ngalokho ongathanda ukubona ngqo izilwane kancane: endishini, ithoyizi, ithambo, egatsheni lesihlahla ... Mhlawumbe, e namazinyo ikati lakho kugcina i-mouse noma inja izinwele - burdock? Noma ukuze isithombe siphelele sintula umbala? Ngokulandelayo, ukusebenza ngokusebenzisa ingemuva: ihlathi, egcekeni, aquarium, lolwandle. Kubalulekile ukuthi uyikhumbule - uma sithola izilwane step by step, ebonisa izihlahla, amatshe, izintaba ngokulingana kudingeka isilo, kubalulekile ukuba sicabangele kude kangakanani lezi leti. Uma uqiniseka lihlehla ipensela, qala prettification.
Isinyathelo sesihlanu: Manje kufanele isandla upende ...
Lapha, ukuqala, lapho sifunda ukudweba izilwane zasendle ngezigaba, kuba lula ukusebenzisa amapensela. Fundisa ingane yakho ukuba eqele ngalé wabuka komzimba wesilwane. Ake sithi uthi ozama ngiyothatha isikhala esiningi ngangokunokwenzeka. Sitshele ukuthi izinwele ikhula indlela ethile, ngakho kangconywana futhi sibukeka kangcono kakhulu lapho izinwele kungenziwa wadedelwa, wayesedlulela ngesikhathi esifanayo zihlanzeke futhi icocekile. On emphethweni noboya kuba mnyama phezu izindawo ezivelele - elula. Badlule ngemuva. Qalisa phezulu. Penda esibhakabhakeni ngokulinganayo futhi nendawo, ngakho njengoba akufanele imivimbo ukubonwa. Ukuzama zonke izinhlobo amahlamvu Kuvunguza squiggle.
Dala zoo yakho!
Into esemqoka ukuthi sifunde ukuthola izilwane - nikhumbule ukuthi kubalulekile ukwakha, okuyinto njalo has ngesisekelo futhi izimiso ezifanayo. Hamba nengane yakho, kusukela elula izilwane eziyinkimbinkimbi. Zama ukuveza kubo siyahamba, njengabantu ngabanye qondanisa kwenye sibalo: izinhlanzi kanye amahlengethwa edlala amazinyane. Ngokushesha zoo yakho luyokhula umcabango umculi osemusha iphelile.
Ukucisha fan - Ukukhetha umthetho